Fomba ara-panjakana manoloana ny fahafatesan’ny Filoha Zafy Albert - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
- Hapetraka ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena ny razana manomboka ny alahady 15 oktobra 2017 ka hisy ny famangiana izay ataon’ny malagasy rehetra. Marihina etoana fa tsy mijanona maharitra ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahan-tena ny mpamangy noho ny zava-misy eto amintsika.
- Hisy ny fotoam-pivavahana firaisam-pinoana izay tarihin’ny FFKM ny alatsinainy 16 oktobra 2017.
- Aorian’ny fotoam-pivavahana dia mitodi-doha mankany amin’ny faritra avaratry ny nosy, any Betsiaka Ambilobe, ny vata mangatsiakan’ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Profesora Zafy Albert.
- Ny fisaonana amin’ny alalan’ny fampidinana ny sainam-pirenena eo amin’ny antsasany dia atao hatramin’ny fotoana izay hanitrihana ny razana.
- Amin’ny andro handevenana azy dia hisy ny fisaonana nasionaly. Noho izany dia mihatra avokoa ireo fombafomba rehetra anehoana ny fisaonana toa ny fanakatonana ny toerana fisotroana zava-pisotro misy alikaola, ny fanajanonana ireo lanonana maro samihafa, ny fandefasana mozika mafy.
Nanatrika ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny zanaka vavin’ny Profesora Zafy Albert sy ny solontena roa avy amin’ny fianakaviana.
Mamerina ny fampiononana ny fianakaviana ny tenanay ary Andriamanitry ny fiadanana no hanasitrana ny fery haterak’izao fisarahana izao. Tsy ho an’ny fianakaviana ihany no angatahana izany fanasitranan’ny fery izany fa ho an’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo izay mahatsapa fa very andrarezina, very Ray aman-dreny ary very olo-manga amin’ity firenena ity.